Windows Is Not Activated ကို Activation ဖြစ်အောင်လုပ်ပေးမယ့် Windows Crack
Windows7သုံးတဲ့သူငယ်ချင်းများအတွက် အဖြစ်များတဲ့ Desktop မှာ
အမည်းရောင်နောက်ခံပုံကြီးဖြစ်သွားပြီး ကိုယ်တင်ထားတဲ့ Desktop ပုံ
ပျောက်သွားတတ်ပါတယ်။ ပြီတော့ Desktop ညာဖက်အောက်ထောင့်
နားမှာ ပုံမှပြထားသလို Activate Windows Now ဆိုပြီးဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။ အဲဒါက Online အမြဲတမ်းသုံးတတ်တဲ့ Computer တွေမှာ
အဖြစ်များပါတယ်။ Computer မှာ Windows တင်ကတည်းက Windows Update ကို Auto update
ဖြစ်နေလို့ပါ။ အဲဒါကို Never Check For Updates လို့ပြောင်းပေးလိုက်ပြီး ခုတင်ပေးလိုက်တဲ့ Windows Crack ကို Run ပေးလိုက်ပါ။ Install မလုပ်ခင်မှာ မိမိစက်မှာသွင်းထားတဲ့ Antivirus ကို ခနတော့ Disable လုပ်ထားပေးပါ။ Restart ကျသွားပါလိမ့်မယ်။ Windows ပြန်တက်လာလျှင်မိမိတင်ထားတဲ့ပုံနဲ့ပြန်တက်
<<<<<Windows Crack Software Download Here>>>>>
Cyberlink_PowerDVD_Ultra_14.0.3917.58 Full Version...
Virtual Box Software and Guide Ebook & Video Train...
Computer အတွက် Zapya Software
Windows Is Not Activated ကို Activation ဖြစ်အောင်လ...
Easy Office 2013 Ebook လေးလိုချင်သူများအတွက်
Tracks_Eraser_Pro_8.92_ Portable Software လေးပါခင်...
Hide IP Easy 5.3.4.2 software လေးပါ။
WirelessNetView 1.56 Final Portable Software လေးပါ...
Windows Password Unlocker Enterprise v 5.3.0 Softw...
မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ PC မှာ Network_Speed ပြတဲ့ Portable...
TCP IP Protocol Suite. Fourth Edition အကြိမ်ထုတ်ထာ...